सुन्दर पत्रुस, सेन्ट पीटर्सबर्ग, Leningrad - को Neva नदी मा एक ऐतिहासिक शहर। हरेक वर्ष यो पर्यटकहरु लाखौं द्वारा भ्रमण छ। तिनीहरूले धेरै आकर्षण को तस्वीर लिन इच्छुक छन्। अभिलेखहरु रूस बासिन्दा र विदेश भण्डारण असंख्य "जन्म प्रतिभा पत्रुस" तस्बिरहरू। सुन्दर फोटो रिपोर्ट साथै, जो प्रस्तुत गर्न सेन्ट पीटर्सबर्ग देखि ल्याए गर्न सकिन्छ? हरेक अतिथि को यो प्रश्न चासो।
माल हुनेछ - खरीदार पाउन सक्नुहुन्छ!
Stalls, पसलहरू, विशेष पसलहरूमा स्मृति चिन्ह को सामान्य वर्गीकरण भरिएका छन्: सस्तो फ्रिज चुम्बक, मेट्रो कार्ड संग कलम, kaleidoscopes "सेन्ट पीटर्सबर्ग को उपनगर," Bells "आकर्षक", पर्खाल "सेन्ट पीटर्सबर्ग" फ्लास्क "महल पुल" हिउँ विश्व मा प्लेट " कांस्य horseman। "
पुस्तक मेला मा, लोकप्रिय स्मारिका छापिएको उत्पादनहरु लागि expanse (पछि एन K. Krupskoy नाम संस्कृति को घर मा स्थित) "Krupa" भनिन्छ। यो बिन्दुमा पत्रुसले एक उपहार रूपमा ल्याउन के लामो समय को लागि संकोच छैन।
सानो र ठूलो मुद्रा को लागि एक सरल पात्रो आफ्नो प्रेमीका केहि सुन्दर डिजाइन गर्न भनेर पुस्तिका, पुस्तकहरू सबै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कसलाई लागि ताजा रंग प्रिंट गन्ध, पर्यटक छन् - एक स्मारिका Ornamental thimbles, नाउ, coasters, घडीहरू, मग, sphinxes को मूर्तिहरु भन्दा बढी मूल्यवान।
"जेनिथ" - को च्याम्पियन!
तर, धेरै मान्छे केही विशेष स्थिति, सेन्ट पिटर्सवर्गलाई "चाल" रुचि हो। विषय बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। का फुटबल सुरु गरौँ। तिनीहरूले भन्छन्: Dinamo "म एक प्रशंसक हुँ" जेनिथ ", तपाईं को बिरामी हुनुहुन्छ" "!" एक Astronomical नामको महिमाको टोली को मालिकको थाह, यो सारा (अक्सर शहर को आफ्नो शहर स्वदेशी बासिन्दाहरू उल्लेख) "Piterburh" देखिन्छ।
"पत्रुस देखि एक उपहार रूपमा के ल्याउन?" उहाँले भन्न संकोच थिएन: - एक टोली रूमाल होइन फूल "जेनिथ" संसारमा कहीं पनि जीवित एक प्रशंसक सोध्न "गुलाब!"! यस मामला मा, यो नीलो र सेतो छ।
वस्त्र, बैग, चप्पल, भान्सा बर्तन: त्यहाँ अन्य मुद्रा लडाई विरोधी विमान रंग हो। Gostiny Dvor मा, केन्द्रीय स्टोर (Nevsky र Sadovaya को कुना) मा हुन सक्छ "suvenirku" किन्न। तथापि, उत्पादन अन्य प्रमुख रिटेल आउटलेट र खोखे विमानस्थल, रेलवे स्टेशनमा खरिद गर्न सकिन्छ।
अक्सर यात्री यस क्षेत्रका विशिष्ट खाना बाहिर केहि प्राप्त गर्न सपना छन्। व्यापार नेटवर्क को तीव्र विकास एक युग मा कठिन बनाउन। यसलाई अग्रिम कहाँ र कुन ल्याउन जान्न विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। सेन्ट पीटर्सबर्ग, खाद्य "अरूबाट अलग" प्रस्तुत गर्न बाट, धेरै यात्री ल्याए। यो "मोड" एक मायालु नाम "smelt" एउटा माछा भनिन्छ गर्न सकिन्छ। यो ताजा ककडी जस्तै असामान्य Smells छ।
निस्सन्देह, यो क्याच र मात्र होइन यस क्षेत्रमा यो बेच्न। तर यो धेरै सम्मान छ! मौसम जाडो र वसन्त को शुरुवात को तार संग analogy मा खुल्छ। छुट्टी smelt दिन (मे) भनिन्छ। बासिन्दा पत्रुस युरोपेली Osmerus गर्न accustomed। अतिरिक्त लामो पन्ध्र - अठार सेन्टिमिटर, वजन - एक सय ग्राम। बाल्टिक माछा ठूलो Ladoga - सानो। स्थानीय सधैं, शीघ्र जहाँ तपाईं स्वादिष्ट रे-finned खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
smelt माछा व्यञ्जन प्रशंसक बहुमत एक विनम्रता रूपमा मानिन्छ। पानी तत्व को एक प्रमुख बासिन्दा को मूल्य को लागि अधिक महंगा छ। तथापि, विशेषज्ञहरु भन्छन्: एक trifle पनि धमाका साथ जान्छ। यो चिप्स को आधार मा तला गर्न सकिन्छ। धेरै जस्तो खस्ता मज्जाको! त्यसैले एक विकल्प छ! मात्र दया smelt सिजन छोटो छ।
स्वाद क्रान्तिको असफल?
मिठाई! यहाँ तपाईं उपहार पत्रुसले फिर्ता ल्याउन सक्छन् के! त्यहाँ NK पछि नाम सोभियत युग मिठाई कारखाना देखि प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक शहर हो Krupskaya (1938 मा निर्मित)। धेरै वर्ष को लागि यो राम्रो स्वाद उत्पादनहरु लागि प्रसिद्ध छ। , घर चकलेट ल्याउन सेन्ट पीटर्सबर्ग यात्री लागि मिठाई immutable व्यवस्था छलफल। मात्र उजुरी तिनीहरूले धेरै मिठो थिए थियो। चिनी बस्ट मान्छे अतीत मा Leningrad घेरा बताए।
यसको अस्तित्व समयमा, धेरै परिवर्तन भएको छ। को बीसौँ शताब्दीको नब्बे ट्युनिङ मा कम्पनी एक संयुक्त स्टक कम्पनी बन्यो। यो 2006 मा नर्वेजियन औद्योगिक कम्पनीहरु को "Orkla" समूह को भाग भयो। झन्, तपाईं Gourmets सुन्न सक्नुहुन्छ: नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग र उत्पादन को संरचना को समायोजन, "स्वाद को क्रान्तिको" गरेनन्।
छैन कोमल र पहिले जस्तो स्वादिष्ट रूपमा - "Kudesnitsa", "Firebird", "लोखर्के", "भालु उत्तरका मा" - यो उपभोक्ता मनपर्ने चकलेट भर्नु, भन्छन्। एक प्रसिद्ध चकलेट "विशेष" र "गर्मी बगैचा"? यसको स्वाद सामान्य देखि markedly फरक छ कि - केही यसलाई पुरानो दिन, अरूलाई मा जस्तै हो तर्क।
को "नमूना" कारखाना देखि Tapestries
मानिसहरू "Mishutka" वाफल्स प्रशंसा। तिनीहरूले चकलेट र पागल को पत्रमार्फत केक सम्झाउने। बदाम expanse को प्रशंसक पक्कै खरीद पछुताउनु छैन। माग चकलेट समझ। दायरा मात्र सामान्य कुकुर, बिरालोहरु, चरा, कछुवा। छल्ले, दुलही र दुलहा मूर्तिहरु संग कबूतर - शायद चकलेट उत्पादक, जोडी जस्तै उत्सुक cottagers। सेन्ट पीटर्सबर्ग को दृश्य खाद्य पदक झूठ छैन।
यसरी, मिठाई किनेको। यसलाई पत्रुस देखि एक उपहार रूपमा ल्याउन के ज्ञान को विस्तार को दिशा मा कार्य जारी राख्न समय छ। राम्रो Vyritsky Tapestries स्थापित। Vyritsa आधारित v1944 वर्ष को गाउँमा कारखाना "नमूना"। केही भनिन्छ गर्न swans संग पुरातन पर्खाल चटाई को आधुनिक कला संस्करण, को XXI सताब्दी को kitsch एक प्रकारको प्रयास गर्छन्। तर, हामी generalizations गर्न हतार छैन।
दृश्य रेखाचित्र को Gatchina पार्क को Pushkin विषयहरू, कारखाना कलाकारहरूको विकास सेन्ट पीटर्सबर्ग कला र उद्योग प्रतिष्ठानमा स्नातक। एक आधार प्राचीन प्रिंट र Watercolors रूपमा लिएको। त्यहाँ प्रसिद्ध कलाकार द्वारा चित्रहरु प्रजनन छन्। उत्पादन गुणस्तर खुसी छ: तस्विर राम्रो देखिन्छ। कुल बारेमा 250 नाम विकास।
मीठो हृदय रेट्रो
पत्रुस देखि उपहार के ल्याए गर्न सकिन्छ स्मृति चिन्ह को मा विचार, सबै भन्दा अनपेक्षित स्थानहरू नेतृत्व हुन सक्छ। को "विशिष्ट" मेट्रो स्टेशन फ्लिया बजार फैलाउन छ। त्यहाँ एक सुझाव छ: छ Leningrad को एक धेरै भद्र आय बासिन्दा, पुराना कुराहरू प्रेम, पोषित राखिएको। तिनीहरूले बासिन्दा रेट्रो पृथ्वीको एक राम्रो नयाँ पुस्तामा मा "केही विशेष" बाट समय बन्द जो दैनिक वस्तुहरु, मा फ्लैट्स एक धेरै जम्मा गरेको छ।
त्यहाँ जो सानो कुरामा "जंक" जंक कल ती छन्। बजार जीवित छ कसरी लामो द्वारा न्याय र राम्रो, यो छैन। केही पर्यटकहरु प्राचीन कुरा किन्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तर टी-34, एक स्टार, को सोभियत संघ को पहिलो उपग्रह संग कुँदिएका एक कप होल्डर खरीद द्वारा खुसी महसुस गर्ने ती पुरानो धेरै को प्रशंसक बीच।
अब उत्पादन गरिएका पार्ट्स, पुरानो आभूषण, भूल प्लेट, मूर्तिहरु, - सामान्य मा, त्यहाँ पत्रुस देखि एक उपहार रूपमा ल्याउन के छ। कसैले यो सबै गलत भन्ने लाग्छ थियो। म कसरी थाह: - लाग्छ के यो इतिहास देखि एक उपहार हो भनेर सम्भव छ। को गिर्जाघर नजिकै, शहर को केन्द्र मा "curiosities" किन्न इच्छुक समयमा विदेशी पर्यटकहरु। अब फ्लिया बजार सरहद सारियो, तर यो Neva मा शहर मा सबै भन्दा भ्रमण स्थानहरूको एक भएनन् छैन।
पत्रुस म छोरी को उर्दी द्वारा सिर्जना
सायद आँखा "धेरै" बरतन आधा शताब्दी पहिले मेरो आमा, एक चुरोट मामला, आफ्नो हजुरबुबा को reminiscent, उनको बुबा रूपमा हेर्छ तालिका उभिएर कि मूर्ति पतन हुनेछ। सबैले nostalgic भावना र आफ्नो प्रियजनलाई परेर पत्रुसले एक उपहार रूपमा ल्याउन रोज्ने हुनेछ।
नयाँ मालिक पाउन सकिन्छ को वाहक बाट बस descended बरतन मूर्तिहरु, कप, बर्तन, - जसको लागि खरीदार वस्तुहरू बाहेक। मा भएको Lomonosov पोर्सिलेन कारखाना (JSC "इम्पेरियल पोर्सिलेन कारखाना") एक सुन्दर चिया वा कप को बस एक जोडी बनाउँछ।
कम्पनी 1744 मा स्थापित भएको थियो, यो Romanov राजवंश सम्पत्ति मूल थियो। सोभियत समयमा यो "Leningrad पोर्सिलेन प्लान्ट Lomonosov पछि नाम भनिन्थ्यो। माग मात्र कप प्रसिद्ध कवि र शहर को दृश्य, तर पनि पातलो पारदर्शी को silhouettes सजाया हड्डी चीन। सुन्दर र नै सुरुचिपूर्ण, यो जटिल प्रकारका आवश्यकता छैन।
त्यहाँ को अवधारणा छ "प्रचार बरतन।" प्रारम्भिक XX सताब्दी को कलाकार, चित्र विकास, carolers proletarian जीवन। दायरा र आज 1917 को अक्टोबर क्रान्ति समयमा गठन थिए कि पक्षबाट खोजे सकिएन जो, कार्यकर्ता, किसान, Gopnik, चेस छविहरू छन् ( "लाल" सुरु र "सेतो" र विपरित जीत)।
त्यहाँ कलाकार मिखाइल शेम्यकिन को कल्पना को जन्म Kazimir Malevich र Suetin Chashnik (supermatizm) बाट व्यञ्जन, साथै कामहरू छन्। IPE Vladimirsky Prospekt मा एक स्टोर छ। मूल्यहरु उत्पादनहरु लागि भिन्न छन् - गर्न बहुमत धेरै उच्च लागि किफायती छन् कि ती बाट। पत्रुस एक उपहार रूपमा के ल्याउन? चरा, कुकुर को सस्तो सानो संख्याले, उपहार चिया सेट र कफी
धन को दायरा। त्यहाँ एक इच्छा हो भने - फेला पार्न उपयुक्त खरिद समस्या छैन। पसलहरूमा वा विभाग यात्रा ठूलो सपिङ्ग सेन्टर मा पार्टी Borisa Godunova "मा" एक tambourine संग उज़्बेक, "एक संग्रहालय र" र्नतकी Krasavina "," Feodor Chaliapin हुन सक्छ - यी र अन्य मूर्तिहरु देश को बरतन क्रमिक बिवरण छ। एक उपहार पत्रुस फिर्ता ल्याउन सक्छन् के!
कस्मेटिक्स र पेंट
चीन स्टक छैन! सोभियत पटक भएकोले पूर्व सोभियत संघ ज्ञात ब्रान्ड को बासिन्दा "Neva कस्मेटिक्स।" भीड जार, ट्यूब र बोतल आधुनिक सौन्दर्य बजार noticeably सोभियत पुरुष र महिला को मनपर्ने ब्रान्ड eclipsed, तर यो उपभोक्ताहरु प्रसन्न जारी: गुणस्तर र मूल्य दुवै।
पत्रुस एक उपहार रूपमा के ल्याउन? छाला हेरविचार अनुहार, खुट्टा, हात र बाल सेट। साबुन। "स्नान", "conifer", "बच्चाहरु", शायद देश को सबै पसलहरुमा छ। तर तपाईं मीठो अन्य प्रकारका ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। अचानक केही काम गर्नेछ भने - कम लागत। सबैभन्दा उपभोक्ताहरु धेरै राम्रो बोल्छ उत्पादन बारे।
ससेज र क्रीम - - तर पनि "Neva" देशको तेल तेल, ससेज हुँदा समय देखि केहि बाँकी। त्यहाँ कुनै पनि प्रस्तुत हुनुहुन्छ? पत्रुस चिरपरिचित रूसी कलाकारहरूको बहुमत संचालित जो रंग, फिर्ता ल्याउन सक्छ। यसबाहेक, तिनीहरूले कुटिया, को Tretyakov ग्यालरीबाट चित्रहरु पुनर्स्थापना लागि प्रयोग गरिन्छ।
"मास्टर क्लास" को एक श्रृंखला - शुद्ध रंग, उच्च प्रकाश दृढता, सुकाएपछि कायम राख्न टोन छ। मूल्यांकन व्यवसायीक - "उत्कृष्ट।" सपना - "Neva पैलेट" बाट विद्यार्थी कला विभाग सबै कुराको लागि।
के उपहार भविष्यमा र वर्तमान, पत्रुस Shishkin र Aivazovsky फिर्ता ल्याउन सक्छन्? तेल, केदारनाथ, एक्रिलिक रंग, सज्जाकार सामान लागि ब्रश - यो रूस अर्को ठाउँ कि रचनात्मकता लागि वस्तुहरूको यस्तो धनी विविधता संग भन्न कठिन छ। Gostiny Dvor बिक्रि पेंट्स को सेट गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै विशेषता पसलहरूमा छन्।
को Oryol क्षेत्र सबैभन्दा रोचक ठाँउहरु
मास्को, ठेगाना, फोन नम्बर, शीर्षकमाथिको घन्टा र समीक्षा मा अब्खाजिया गरेको दूतावास
"बालुवा खाडी", Sevastopol: विवरण र समीक्षा
कसरी रेल एक बिरालो ओसारपसार गर्न। रेल बिरालोहरु मा पूरा गर्न सही
वर्ना - मास्को: यात्रा समय
जन्म गर्भपतन मा आवंटन - आदर्श वा विकृति
रोल छत सामाग्री। लाभ, बेफाइदा, को मुख्य प्रकार
Cholecystitis को निदान छ? उपचारले डाक्टर नियुक्त गर्नेछ
विरोधी सेल्युलाईट मालिश: समीक्षा, घर मा र सैलून, फोटो मा प्रभाव
आँखा बच्चालाई लागि खस्छ: लागूपदार्थ, निर्देशन नाम
"Vassa Zheleznov": Maksima Gorkogo कामहरू एक सारांश